Jechoota hayyootaa fi makmaaksa - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Namoota mirga dhoorgachuun namummaa isaanii gaafii keessa galchuudha.
Umanni hacuucame mootummaa hacuucu kuffisee isa naaf ta’a jedhuu dhaabachuuf haqa warraaqsa gegeessuu qaba.
Mirga hunda nama dhabsiisuun mirga finciluu namaaf mirkansuudha.
Ciminnii fi guddinni qabsoo/yaalii wolirraa hin cinne qofaan argama.
Tooftaan abbootii-irree moofaan namoota muraasatti dhimma bayuudhaan ummata ukkaamsuudha.
Mirgaa fi bilisummaan ummataa saahuu kan ukkaamfamu maqaaa seeraa kabajsiisuu fi tasgabbii eegsisuutiin.
Dhiigni goototaa sanyii muka bilisummaati.
Warraaqsi hundi gara jalqabaatti waan hin yaadamne/hindanda’amne fakkaata. Takka eegallaan waan dhaabamu ykn too’atamuu miti.
Humni ummataa tasa waan moo’atamuu miti.
Iccitiin gammachuu bilisummaadha. Iccitiin bilisummaa ammoo gootummaadha.
Dadhabbinni keenna guddaan harka laachuudha. Karaan injifannoon shakkii tokkoon maletti ittiin argamu irra deddeebi’aa yaaluudhaan.
Warraqaa ajjeesuun ni danda’ama; warraaqsa ajjeesuun tasa hin danda’amu.
Yoo abbaan-irrummaa sabate, worraaqsi ummataa dhugaa argate.
Worri gaafii karaa nagaa ukkaamsan warraaqsa jeequmsaatti ummata geessan.
Kaleessi keenyaa miti deebisuudhaaf. Boru garuu keenya injifachuufis ta’ee moo’atamuuf.
Namoonni hagoon kutatan addunyaa hin jijjiiran jettee hin yaadin. Hanga har’aattis kan ta’aa ture kanuma.
Nama gochi garajabeenyaa saahuu irratti raawwatu akka ufirraa hin faccisne barsiisuun yakka.
Kan fuula isaa gara ifnana aduu deebise gaaddidduu hin argu.
Yeroo tokko tokko waan ijji hinargine onnee argiti.
Milkaayuuf, fedhiin milkiif qabdu sodaa kufaatii simudatuu maluu hedduu caaluu qaba.
Yeroo hunda diina keetiif dhiifama godhi. Wanti akkas isaan aarsu tokko hinjiru waan ta’eef.
Murannoon milkaayuuf qaban cimaa taanaan, kufaatiin tasa namarra hin injifattu.
Guyyaa waan haamattuun osoo hintaane waan facaafattuun madaali.
Suuta deemuun rakkoo hinqabu, hanga hindhaabannetti.
Dadhabbiin keenya guddaan harka laachuudha. Daandiin ittiin milkii argannu guddaan yeroo hunda altokko irra deebi’anii yaaluudhaan.
Har’a eenyuun akka taane ufbeekna. Wonti nuti hinbeekne boru eenyuun akka ta’uu malluudha.
Imalli kiiloomeetira kumaatamaa tankaarfii takkaan eegala.
Yeroo qajeelatti nutti dukkanoofte kan ifnana arguuf xiyyeeffachuu qabnu.
Hiyyummaa keessatti dhalachuun badii keetii miti. Akka hiyyoomattetti jiraachuudha badiin kee.
Kan takkaa hindogoggorre, isa takkaa waan haarawa hinyaalle.
Aabjuun keenna hunduu dhugaatti nijijjiirama; yoo ari’uu ykn bira gahuuf onnee ykn gootummaa qabaanne.
Sa’aa hinilaalin. Waan sa’aan hojjattu hojjadhu. Funduratti tankaarfadhu.
Dadhabbii ykn hujiin alatti, wonti margu tokko hinjiru aramaa malee.
Seera taphaa barutu sirraa eegama. San booda hundarra fooyyessitee taphachuu qabda.
Sababni injifannoo ykn milkii koo: takkaa harka hinlaanne, sababas hintarreesine.
Karaan tokkichi waan addaa ykn waan cimaa ittiin hojjachuu dandeettu waan hojjattu jaallachuudhaan. Waan jaallattu hanga aammaatti bira hingeenne, wolitti hinbaane yoo ta’e barbaaduu itti fufi. Tasa hintaa’in.
Kan guyyaan isaaf kenne buqqeenuu dhagaa cabsa.
Hanga waacufti guutamuuf kan eeggatu tasa waan tokko hin hojjatu.
Yeroon irra gaariin muka dhabuun male woggaa 20 dura. Inni gaarii lammataa amma.
Torba kufii saddeetaffa ka’i.
Waan dhagayu nidagadha. Waan argu niyaadadha. Waan hojjadhu ni hubadha.
Wonti tokko tokko ija nama harkisa. Waan qalbii kee hawate qofa hordofi garuu.
Durummaan karaa lamaan: takkaa horrii heddu wolitti qabuu ykn hawwii daangaa hinqabne dhaabuu.